Ixabiso eliphantsi lomthamo oManyeneyo kunye nesihlanganisi somatshini weGranulator abaXhasi kunye noMzi mveliso | YiZheng
Loluphi uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator?
Inkqubo ye- Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compoundizer ye-Compactizer sisixhobo segranulation esetyenziswa kakhulu kwimveliso yezichumisi ezimbaxa, izichumiso eziphilayo, izichumiso zebhayoloji, izichumisi ezikhutshwayo ezilawulwayo, njl.Yilungele ingqolowa enkulu ebandayo neshushu kunye nezichumisi eziphezulu, eziphakathi nezisezantsi.
Eyona ndlela iphambili yokusebenza yi granulation emanzi Ngokobungakanani bamanzi okanye umphunga, isichumiso esisisiseko siyasetyenzwa ngokupheleleyo emva kokufakwa kwisilinda. Ngaphantsi kweemeko zolwelo ezimiselweyo, ujikelezo lwesilinda lusetyenziselwa ukwenza amasuntswana ezinto ukuvelisa amandla atyumkileyo ukudibanisa abe ziibhola.
Yenzelwe ntoni igranulator yesichumisi esimbaxa esetyenziselwa yona?
Oku Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compoundizer ye-Compactizer yimveliso entsha enelungelo elilodwa lomenzi eliphuhliswe yinkampani yethu kunye neZiko loPhando ngoomatshini bezoLimo. Lo matshini awunakucoca kuphela izinto ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, ngakumbi izinto zefayibha ekunzima ukuba zityunjwe zizixhobo eziqhelekileyo, ezinjengomququ wezityalo, intsalela yewayini, intsalela yamakhowa, intsalela yeziyobisi, ubulongwe bezilwanyana njalo njalo. I-granulation ingenziwa emva kokuvumba, kwaye inokufezekiswa kwisiphumo esingcono sokwenza ukutya okuziinkozo kwi-asidi kunye nodaka lukamasipala.
Iimpawu zohlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator
Inqanaba lokwakheka kwebhola lifikelela kuma-70%, amandla ebhola aphezulu, kukho isixa esincinci semathiriyeli yokubuyisa, ubungakanani bezinto zokubuyisa zincinci, kwaye ipelete inokuphinda yenziwe granulated.
Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulation Production Line Apha singakunika
I-10,000-300,000 yeetoni / ngonyaka umgca wemveliso yechumisi ye-NPK
I-10,000-300,000 yeetoni / unyaka wemveliso yemveliso yezichumiso eziphilayo
I-10,000-300,000 yeetoni / unyaka wokudibanisa umgca wemveliso yezichumiso
I-10,000-300,000 yeetoni / inkqubo ye-ammonia-acid, i-Urea esekwe kumgca wokuvelisa isichumisi
I-10,000-200,000 yeetoni / unyaka umgquba wezilwanyana, inkunkuma yokutya, udaka kunye nolunye unyango lwenkunkuma kunye nezixhobo zegranulation
Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Umboniso weVidiyo
Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Model
Egqithileyo Idiski yeOrganic yeComputer kunye neComputer Granulator
Okulandelayo: Uhlobo olutsha lweOrganic kunye necomputer yesichumisi seGranulator